OLCreate: Digital skills digital learning - Myanmar ကျေးဇူးတင်လွှာ
ဤသင်တန်းကို bizMOOC စီမံကိန်းအတွက် Dida (အီတလီ) နှင့်ဥရောပရှိ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ (ဘယ်လ်ဂျီယံ) မှ မိတ်ဖက်များနှင့်ပူးပေါင်း၍ the Open University (UK) က ဖန်တီးထားပါသည်။ ခွင့်ပြုထားသည့် လိုင်စင်မှတစ်ဆင့် အွန်လိုင်းမှရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များကို အောက်ပါ ကိုးကားချက်များအတိုင်း အသုံးပြုထားသည်။ ဤသင်ရိုးကို မြန်မာပြည်အတွက် ရည်ရွယ်သော TIDE စီမံကိန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ပြုပြင်ထားပါသည်။
Unsplash [Tip: hold Ctrl and clickalink to open it inanew tab. (Hide tip)] မှ Devin Avery ၏ သရုပ်ဖော်ပုံ
ဤသင်တန်းကို bizMOOC စီမံကိန်းအတွက် Dida (အီတလီ) နှင့် ဥရောပရှိ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ (ဘယ်လ်ဂျီယံ) မှ မိတ်ဖက်များနှင့်ပူးပေါင်း၍ the Open University (UK) မှ ဖန်တီးခဲ့သည်။ ယခုသင်တန်းက အောက်တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အွန်လိုင်းတွင်ရှိနေပြီးသား အရင်းအမြစ်များကို များသောအားဖြင့် ပြန်အသုံးပြုထားပါသည်။
သရုပ်ဖော်ပုံ Olle Svensson ၏ Learning to ride, CC BY-NC 2.0
Learner Experiences with MOOCs and Open Online Learning, CC BY-NC 3.0 မှ ယူထားသည့် Learner stories
Succeed with learning, The Open University, CC BY NC SA ကို သင့်တော်အောင် ပြုပြင်ထားသည့် How do you learn?
Succeed with learning, The Open University, CC BY NC SA ကို သင့်တော်အောင် ပြုပြင်ထားသည့် Setting SMART goals
Succeed with learning, The Open University, CC BY NC SA ကို သင့်တော်အောင် ပြုပြင်ထားသည့် Developing your action plan
Learning to learn: ကို သင့်တော်အောင် ပြုပြင်ထားသည့် Learning journals Planning for personal change, The Open University, CC BY NC SA.
သရုပ်ဖော်ပုံ Aikawa Ke ၏ Head Skill, CC BY-NC-ND 2.0
Digital literacy: succeeding inadigital world, The Open University, CC BY NC SA ကို သင့်တော်အောင် ပြုပြင်ထားသည့် Information inadigital age
Digital literacy: succeeding inadigital world, The Open University, CC BY NC SA ကို သင့်တော်အောင် ပြုပြင်ထားသည့် Digital skills and digital literacy
Digital literacy: succeeding inadigital world, The Open University, CC BY NC SA ကို သင့်တော်အောင် ပြုပြင်ထားသည့် A framework for digital skills
Visitors and Residents ကို သင့်တော်အောင် ပြုပြင်ထားသည့် Visitors and Residents, CC-Attribution 4.0 International Licence အောက်တွင် ထုတ်ဝေသော အောက်ပါ အရင်းအမြစ်များ မှ အချက်အလက်များကို စုစည်းပေးသော အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၏ National Forum for the Enhancement of Teaching & Learning မှ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သည့် All Aboard စီမံကိန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Iain MacLaren (NUIG) ၏ စာ/အကြောင်းအရာ
သရုပ်ဖော်ပုံ Unsplash မှ John Carlisle ၏ DIY Electrical Board at Craft Lake City
စာသားအား What isaMOOC? ကို သင့်တော်အောင် ပြုပြင်ထားသည် Martin Lugton ၏ What are the different types of MOOC? xMOOCs and cMOOCs CC BY NC SA နှင့် Teaching and learning in the 21st century, CC BY SA ၏ Types of MOOCs
What isaMOOC? ဗီဒီယို - Neal Gillis သုတေသန - Bonnie Stewart, Alexander McAuley, George Siemens and Dave Cormier Social Sciences and Humanities Research Council ၏ "Knowledge Synthesis Grants on the Digital Economy", CC BY မှတစ်ဆင့် the University of Prince Edward Island မှ ရရှိသည့် ရန်ပုံငွေဖြင့် ဖန်တီးထားသည်။
'How do I measure the quality of the MOOC on offer?', bizMOOC Book Guidelines, CC BY-SA ကို သင့်တော်အောင် ပြုပြုင်ထားသည့် Assessing MOOCs
Dion Hinchcliffe ၏ Today's Critial Digital Workforce Skills
သရုပ်ဖော်ပုံ Unsplash မှ Cody Davis ၏ Blorange
TEDxWarwick 2012 မှ Doug Belshaw ၏ The essential elements of digital literacies
David Wiley ဖန်တီး၍ Creative Commons Attribution 4.0 လိုင်စင်ဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဝေသော The 5R permissions
About Licensing, ExplOERer course including images မှ မှီငြမ်းသည့် About CC licenses FOTER ၏ How to Attribute Creative Commons Photos,CC BY-SA 3.0 နှင့် Paul Stacey ၏ Creative Commons Licenses CC BY 4.0
Hack the news အား Hack the news ကို သင့်တော်အောင် ပြုပြင်ကာ Hive New York City မှ ဖန်တီး၍ Mozilla, CC BY-SA.၏ Clubs အတွက် ပေါင်းစပ်ဖန်တီးသည်။
Twitter, Funny Memes မှ If Earth Isn’t Flat
Twitter, Tony Little မှ Real Food,
Susan Fawssett ၏ MOOC Study Anywhere